ज्यानमारा रुख ! यसबाट टाढै रहनु बेस् – Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ २१, मंगलवार ११:२५ [post-views]
काठमाडौं। प्रकृतिको हरियाली सबैलाई प्यारो लाग्छ। अझ गर्मीमा हरियो रुखको छहारीमा बस्न कसलाई मन लाग्दैन र ? तर केही रुख यति खतरनाक हुन्छन्, जसको छेउछाउमा पुग्नु पनि मानिसका लागि मृत्युको कारण बन्न सक्छ ।
यो रुख भारतसहित दक्षिण पूर्वी एसियाका केही मुलुकमा पाइन्छ ।
सरकारबाट बाहिरिने उपेन्द्र यादवको तयारी